किन भइरहेको छ कुखुराको मासु अहिलेसम्मकै महँगो ? - Himali Patrika
किन भइरहेको छ कुखुराको मासु अहिलेसम्मकै महँगो ?
हिमाली पत्रिका १ बैशाख २०७८, 5:19 pm
‘कुखुराको मासुको भाउ अहिलेसम्म यति पुगेको थिएन, यति महँगो भएको पहिलो पटक हो,’ उनले भने।
‘बर्डफ्लुले अत्यधिक कुखुरा नष्ट भएको छैन। यसको बहानामा मूल्य बढाउनु उचित छैन,’ उनले भने।
‘अहिले दानाको मूल्य एकदमै महँगो भएको छ। भटमास वा मकैमा एक रूपैयाँ बढ्यो भने पनि दानाको मूल्य बढाइहाल्छन्। दानामा भटमास र मकैको मात्रा कति छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘चल्लाको पनि अवस्था उस्तै छ। ह्याचरीले प्रतिचल्ला ८० रूपैयाँ तोकेको छ तर किसान एक सयदेखि एक सय दस रूपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्।’
‘बर्डफ्लु बहाना मात्र हो। दाना र चल्लाको भाउ धेरै बढेको छ। सरकारले पहिला यसमा अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मासुको मूल्य वृद्धिबारे पनि तत्काल अनुगमन गर्नुपर्छ।’